Guddiga doorashooyinka oo maanta dooranayo guddoomiye cusub - Idman news
Guddiga doorashooyinka oo maanta dooranayo guddoomiye cusub
Muqdisho (Caasimada Online) – Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa lagu wadaa in maanta lagu qabto doorashada guddoomiyaha cusub ee Guddiga Doorashooyinka ee Heer Federaal, taas oo qaban qaabadeeda ay ka socoto hotel Decale.
Wararka ayaa sheegaya in haatan uu socdo diyaar garowgii ugu dambeeyey ee doorashada guddoonka cusub ee beddalaya guddoomiyihii xilka laga qaaday Maxamed Xasan Cirro.
Xilka guddoomiyaha Guddiga Doorashada ee Heer Federaal ayaa waxaa si weyn ugu loolamayo xubno ka kala sopcdo labada xafiis ee ugu sareyso dalka ee kala ah midka madaxweyne Faramaajo iyo kan Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Xubnaha xafiiska Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa u ololeenayo inuu tartanka guddoomiyaha guddiga doorashada kusoo baxo Cabdiraxiim Cabdicasiis, waxayna gudaha guddiga ka wadaan olole xooggan si ay Berri guusha iyaga u raacdo.
Dhanka kale, Ra’isulwasaare Maxamed Xusseen Rooble iyo xulafadiisa ayaa waxay wataan musharax Muuse Geelle waxayna caawa xubnaha guddiga doorashada heer Federal u qeybiyeen lacago si ay Berri u doortaan musharaxa ay wataan.
Labada xafiis ee ugu sareyso dalka ayaa ku dagaalamaya cidda noqoneyso guddoomiyaha guddiga doorashada heer Federaal oo fure u ah doorashada xubnaha Golaha Shacabka kadib markii dhawaan xilkii laga qaaday guddoomiyihii hore Maxamed Xasan Cirro oo xiriir dhow la lahaa Villa Somalia.
Si kastaba, doorashada guddoonka cusub ayaa muhiim ah doorashada Golaha Shacabka ee haatan lasii amba qaadayo, maadaama guddigan uu laf-dhabar u yahay doorashada socota.
Previous Shil gaari oo ka dhacay Muqdisho iyo khasaare ka dhashay. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Next Guddiga doorashooyinka heer Federaal oo maanta dooranayo guddoomiye – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Sawirro: Rooble oo Odayaasha Dhaqanka iyo Guddiga Doorashada beelaha Banaadiriga kulan la yeeshay
Opinion: Here’s the bull case for Robinhood’s stock, but it’s not an ideal scenario for everyone
Warka Galab Shabelle Tv 29.1.2022
Opinion: Here’s the bull case for Robinhood’s stock, but it’s not an ideal scenario for everyone January 29, 2022
Warka Galab Shabelle Tv 29.1.2022 January 29, 2022
Sawirro: Rooble oo Odayaasha Dhaqanka iyo Guddiga Doorashada beelaha Banaadiriga kulan la yeeshay January 29, 2022